Galaxy Tab S3 နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများ Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | Android တက်ဘလက်များ
Mobile World Congress ၏ ၂၀၁၇ ထုတ်ဝေမှုအားတနင်္လာနေ့အထိတရားဝင်မစတင်သော်လည်း၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးမှထုတ်လုပ်သူများကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒီနှစ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည့်အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုမနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့သည်။ ။ Huawei နှင့် LG တို့မှာအထင်ရှားဆုံးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ Samsung သည်မတ်လကုန်အထိ Galaxy S2017 ကိုနှောင့်နှေးရန်ပိုမိုနှစ်သက်သည် (ဘာစီလိုနာတွင်ပြသမည်မဟုတ်ဟူသောထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်) သူ၏နောက်လိုက်များကို၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာသတင်းများမပါဘဲမထားလိုခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သူသည် Samsung Galaxy Tab S8 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Galaxy Tab S3 သည် Samsung ၏အဆင့်မြင့်တက်ဘလက်အသစ် အားလုံးနီးပါးကတူညီတဲ့အမြင်ရှိကြပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ Android operating system မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အက်ပဲလ်ရဲ့အိုင်ပက်နဲ့ယှဉ်ရင်အတန်အသင့်ဆုံးပြိုင်ဘက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့သော်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထူးခြားချက်များကြောင့်စျေးကွက်တွင်ကွာဟမှုကိုဖြစ်စေရန်ခက်ခဲစေနိုင်သည်။
1 iPad Pro နှင့်အပြိုင် Samsung Galaxy Tab S3
iPad Pro နှင့်အပြိုင် Samsung Galaxy Tab S3
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကောလဟာလအားလုံးနီးပါးအရအက်ပဲလ်သည်၎င်း၏အိုင်ပက်ဒ်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး Samsung သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တက်ဘလက်ကို Android ဖြင့်စတင်ခြင်းဖြင့်တစ်နှစ်တာအားကြီးစွာစတင်လိုခဲ့သည်။
Samsung Galaxy Tab S3 ကိုဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress 2017 ၏မူဘောင်အတွင်းတွင်တင်ပြခဲ့သည် ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအဆင့်မြင့်တက်ဘလက်, လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များတွင် (ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကအတည်ပြုသည်အတိုင်း) ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့် 679 ယူရို၏စတင်စျေးနှုန်းရပါလိမ့်မယ်။
Samsung Galaxy Tab S3 ငါတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာများနှင့်အညီနေထိုင်ကြသည်ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှတော်လှန်ရေးသမားပစ္စည်းကိုမျှော်လင့်မထားသင့်ပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမိုဘိုင်းပစ္စည်းဈေးကွက်မှာတော်လှန်ရေးအသစ်တစ်ခုနဲ့ဝေးနေပုံရတယ်။
Galaxy Tab S3 တက်ဘလက် ယခင်မျိုးဆက်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကီးဘုတ်၏တည်ရှိမှုအပြင်ဘောပင်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်, အီလက်ထရောနစ်ခဲတံသို့မဟုတ်သင်ခေါ်ချင်သမျှ, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်အတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် စပီကာလေး အသုံးပြုသူမာလ်တီမီဒီယာအတွေ့အကြုံကိုအသံအရသိသိသာသာတိုးတက်စေမည့် (မျက်နှာပြင်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ၊ သေးငယ်သည့်ဘက်များ၌နှစ်ခု) ။
ဆမ်ဆောင်းရဲ့တက်ဘလက်အသစ်က ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် (၎င်းသည်သူ၏အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်သည် ၁၀.၅ to အထိကြီးထွားရန်ရည်ရွယ်ထားပုံရသောကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ကောင်းသောအကြံအစည်မဖြစ်နိုင်ပါ) နှင့်အတူ resolution 20.48 x 1536, 237,3 x 169 x6mm (429-434 gram) အရွယ်အစား။
တက်ဘလက်များတွင်ပုံမှန်အတိုင်းဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံအပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကိုမမျှော်လင့်သင့်ပါ၊ သို့သော်တချိန်တည်းမှာပင် Galaxy Tab S3 သည်သင့်အားဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။f/ 13 aperture ပါ ၀ င်သော 1,9 megapixel နောက်ဘက်နောက်ကင်မရာနှင့်သင်၏ ရှေ့ကင်မရာ5megapixelဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ရံဖန်ရံခါ selfie များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Galaxy Tab S3 တွင် Android Nougat ကိုအသုံးပြုထားပြီးအရောင်နှစ်မျိုး၊ အနက်ရောင်နှင့်ငွေရောင် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သင်၏စနစ်သည်ပရိုဆက်ဆာတစ်လုံးဖြင့်လည်ပတ်လိမ့်မည် Snapdragon 820 Qualcomm မှ ((2x Kyro 2.15 GHz + 2x Kyro 1.6 GHz) နှင့်လိုက်ပါရန် Adreno 530 နှင့်အတူ RAM4GB နှင့်သိုလှောင်မှု 32 GB သောကျေးဇူးတင်စကားကြောင့်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် microSD ကဒ်အထိုင်.
Galaxy Tab S3 | ပုံရိပ် - ကေသီဝီလန်း၊
သူ့ကိုမမေ့သင့်ဘူး 6.000 mAh ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း, connector ကိုအတူ USB မှတ်-C မှာ သို့မဟုတ် ၄ င်း၏ဆက်သွယ်မှု Bluetooth ၄.၂ LE နှင့် NFC ။
ကျနော်တို့စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်း၏စတင်စျေးနှုန်း, ၌တည်ရှိ၏ 679 ယူရို သို့သော် အကယ်၍ သင် LTE ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပါက Samsung သည်နံပါတ်များနှင့်မျက်နှာပျက်စရာမလိုဘဲ "သင်ကခုန်သည်" ၇၆၉ ယူရိုနဲ့နေရာတိုင်းမှာချိတ်ဆက်နိုင်မယ့်မော်ဒယ်တစ်လုံးကိုသင်ကမ်းလှမ်းထားတယ်။ စုစုပေါင်းထည့်ပြီးပြီ, နောက်ထပ်ကိုးဆယ်ယူရိုပို!
Samsung Galaxy Tab S3 သည် Apple ၏ iPad Pro range နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပိုမိုဒီဇိုင်းပုံရသည်။ ၎င်း၏ keyboard, stylus သို့မဟုတ် "အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်" ဆင်တူသည့်ဈေးနှုန်းကြောင့်သာမကဘဲအချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ပါထိတွေ့မှုပေးသည့်လက္ခဏာများအတွက် pro "။
Samsung သည်တက်ဘလက်ကဏ္inတွင်ကြီးမားသောနယ်ပယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေလိုသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အဓိကထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့်စမတ်ဖုန်းအပိုင်းနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်အဆင်ပြေသောအနေအထားကိုမရရှိနိုင်သော်လည်း Android တက်ဘလက်ဖြင့်၎င်းကိုစျေးနှုန်းနီးပါးဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ ယူရိုခုနစ်ရာ?
ပုံစံ က Galaxy Tab ကို S3
operating system Android 7.0 - Samsung အတွေ့အကြုံ
ဖန်သားပြင် SuperAMOLED က ၉.၇ လက်မ resolution (၂,၀၄၈ x ၁၅၃၆ pixels) (9.7 dpi)
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 820 (2x Kyro 2.15 GHz + 2x Kyro 1.6 GHz) + Adreno 530
ရမ်4Gb
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32GB microSD အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်
အဓိကကုန်သည်ကြီးများအသင်း 13 MP ပါသော autofocus -f/ 1.9 - LED flash ဖြစ်သည်
ရှေ့ကင်မရာ5အမတ် - f2.2
ဆက်သွယ်မှု LTE (မော်ဒယ်များပေါ် မူတည်၍) WiFi 802.11a/b/ g / n / ac - Bluetooth 4.2 LE - NFC - USB-C v3.1 OTG
ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနှင့်အတူ 6.000 mAh
ရှုထောင့် 237.3 1696မီလီမီတာ
အလေးချိန် 429-434 ဂရမ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Android တက်ဘလက်များ » Galaxy Tab S3, မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းမှာကြီးသောအင်္ဂါရပ်များ